आठ महिनामा बन्लान् साढे ५ लाख घर ? « प्रशासन
आठ महिनामा बन्लान् साढे ५ लाख घर ?
काठमाडौं । असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता बुझेर घरको छानो राखिसक्नुपर्ने समय तोकेपछि हालसम्म बाँकी रहेका साढे पाँच लाखभन्दा बढी घर निर्माण हुने सरकारी योजना असफल हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसाल असार मसान्तसम्म सबै घर बनिसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणअन्तर्गत व्यक्तिको घर बनाउने काम असार मसान्तमा सकिनेछ । त्यतिबेलासम्म घर नबनाउने व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउँदैन । असारमा सबै घर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले समय निर्धारण गरिएको हो ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले प्रतिवेदन र गफमा मात्र घर बनाउने बताए । ‘साढे दुई वर्षमा नबनेको संरचना आठ महिनामा कहाँबाट बन्छ । जसले दुःख खेपे-खेपे । सरकारले मैले घर बनाउने ठेक्का लिएको छु भनेर पन्छिए सबै कुरा सकिन्छ,’ क्षेत्रीले सोमबार भने, ‘प्राधिकरणले त हामीले संयोजन गर्ने हो भनेर पन्छिइसकेको छ ।’
पूर्वकार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएर काम अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम लथालिंग भयो, दातृ निकायले समेत प्रश्न उठाउन थाले । अब सरकारले स्थानीय निकायलाई यसको जिम्मा लगाएर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खाबर छ ।